Indlela yokuthengisa kwiAmazon: Isikhokelo sokuGqibela
Kule veki, besinomdla omkhulu incoko noRandy Stocklin kwi-podcast yethu. URandy yingcali ye-ecommerce eyasungula i-One Click Ventures, ifemu ephethe ii-eretailers ezintathu ezinkulu kwishishini le-eyeglass. Esinye isihloko esisichukumisileyo kukubaluleka kokuthengisa kwiAmazon.
Ngenxa yokufikelela kwayo okumangalisayo, iAmazon akufuneki igxothwe njengeendlela zokuthengisa kunye nokusasaza nayiphi na imveliso yakho. Ukungancedi kwe u nelayo ubudlelwane nomthengi wakho budlulwa kude ngumthamo wabathengi beAmazon. Ngapha koko, iAmazon itsalela ngaphezulu kwe-150 yezigidi zeendwendwe ngenyanga.
Isitshixo kukusebenzisa izikhokelo ezinje ngale ukuze ufunde kangangoko, ulubethe ukhuphiswano lwakho, kwaye uphephe ukuchitha imali kwiimpazamo zobudenge. Imakethi inokhuphiswano lokwenyani, kwaye okukhona usazi, kokukhona uya kuxhotyiswa ngakumbi ukuze uphumelele ukhuphiswano. URon Dod, utyelelo
Ukutyelela yi-eCommerce Search Marketing Agency kwaye badibene Isikhokelo sokugqibela kulawulo lweAmazon, inqaku elinobunzulu ngokumangalisayo elinazo zonke iinkcukacha ekufuneka uzithathile isigqibo malunga nendlela oza kuthengisa ngayo kwiAmazon, izigqibo eziphambili ekufuneka uzenzile, kunye nendlela yokuqalisa.
Isicwangciso sokuThengisa iAmazon -Misele ukuba ufuna ukuba ngumthengisi ozimeleyo okanye umthengisi oqeqeshiweyo.
Imirhumo yoMthengisi weAmazon -Ukuzalisekiswa, ukuthunyelwa, ukuvalwa, kunye nemirhumo yokudlulisa inokusetyenziswa xa kuthengiswa eAmazon
Ukuzaliseka - Ukuzalisekiswa yiAmazon (FBA) okanye uMzaliseko woThungelwano loRhwebo (MFN) kukhetho lokufumana iimveliso zakho kwigumbi lokugcina ukuya emnyango.
Khetha iimveliso zakho- Awunakufuna i-inventri yakho iphela kwiAmazon, ke ezinye iinkcukacha zibonelelwa ngendlela efanelekileyo yokukhetha ukuba yeyiphi imveliso oyifunayo phaya.
Cwangcisa iimveliso zakho- Yinto enye ukupapasha imveliso, enye ukuyenza ibonakale kukhangelo kwaye ufumane ukuthengisa okuhle. Iingcebiso zibonelelwa ngale infographic.
Ngaba ukhuthazwa ukuba uqalise?
Qalisa ukuthengisa kwiAmazon
tags: Amazonurhwebo lweamazonImirhumo yeAmazonukuzaliseka kweAmazonimirhumo yokudlulisa amazonImirhumo yomthengisi weAmazonIzicwangciso zomthengisi weAmazonimirhumo yokuthumela amazoniirhafu zokuvala eziguquguqukayo ze-amazonfbaukuzaliseka ngamazonindlela yokuthengisa kwi-amazonInethiwekhi eFezekisiweyo yoRhwebomfn